Xarunta Waxbarshada ee Idaacadda Waxbarshada & Amniga - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
A HD tignoolajiyada muujinta dhijitaalka ah si loo hagaajiyo waxtarka shaqada loona xoojiyo saameynta marxaladda ayaa awood u siinaysa isbeddellada cusub ee qolalka xakamaynta warbaahinta.
Iyada oo si tartiib tartiib ah loo sii xoojinayo tiknoolajiyada, shabakadda iyo tiknoolajiyada macluumaadka ee raadiyaha iyo telefishanka, astaamaha analogga ayaa loo beddelay astaamo dijitaal ah
Codsiyada muujinta dijitaalka ah ee qeexitaanka-sare iyo kormeerka caqliga ayaa si aad iyo aad ah loo adeegsanayaa, taas oo keeneysa kacaan istuudiyo dhaqameed casri ah.
Lagu kalsoon yahay Hawlgalka Isticmaalka Khatarta ah。
Laga soo bilaabo naqshadeynta warshadaha birta-adag ee adag illaa teknoolojiyadda qalabka korontada ee loo yaqaan 'patronant', Yonwaytech's LED fiidiyowyada fiidiyowga waxaa loogu talagalay jawiyada saacadaha 7x24 ee muhiimka ah.
La jaanqaadka heerkulka midabka laga bilaabo 3200k ilaa 9300k iyo in ka badan 3840 heerka cusbooneysiinta sare, illaa 65536 dalabka hagaajinta dhalaalka, iyo kontaroolada isku dheelitirnaanta cawlan ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha laga heli karo bandhigyada Yonwaytech LED, taasoo ka dhigeysa inay si gaar ah ugu habboon yihiin isticmaalka hawada. .
La heli karo HD-SDI gashiga qaababka qaarkood ayaa ka dhigaya isku xirnaanta kaabayaasha dhaxalka mid fudud. Darbiyada fiidiyowga aan xaddidnayn ee 'LED' waxay bixiyaan shiraac loogu talagalay wararka, cayaaraha ama dhacdooyinka la soo saaray.